सुविधा र सिफारिसहरू: मेलबक्सहरू र विज्ञापन मा पत्रक को Unaddressed वितरण
मेलबक्स, मा पत्रक को Unaddressed वितरण फ्लायरहरू, पत्रक र अन्य मुद्रित सामाग्री - लक्षित विज्ञापन को एक सुरक्षित र एकदम प्रभावकारी रुप हो। सामान्यतया तिनीहरूले साना र मध्यम आकारको व्यावसायिक संगठन, व्यक्तिगत उद्यमीहरू छन्। को मेलबक्स मा पत्रक को आकर्षक वितरण? यो किन छ विज्ञापन को प्रकार खरिद व्यापार? यी र अन्य प्रश्नहरू हामी यस लेखमा जवाफ प्रयास गर्नुहोस्।
unaddressed विज्ञापन को चयन
प्रभावकारिता र लागत को औचित्य सर्तहरू छापिएको उत्पादनहरु को मेलबक्स को वितरण मूल्याङ्कन गर्न, यो प्रक्रिया हरेक संभावित खरीदार गर्छ रूपमा हेर्न। हामीलाई कुनै पनि, आफ्नो घर को प्रवेश गर्न जा रहेको छ, पहिलो मेलबक्स जाँच गर्नुहोस्। सँगै ठेगाना पत्राचार यो फरक हुन सक्छ, र प्रचार आइटम संग। धेरै मानिसहरू तपाईं स्क्रैप गर्न leaflet पठाउन अघि, सामान र सेवकहरूको प्रस्तावित दायरा परिचित गर्न पक्का छन्। शायद केही रुचि राख्नु केही व्यक्ति प्रदान गर्दछ, र तिनीहरूले थप सल्लाह लागि कम्पनी प्रतिनिधिको फर्कन पर्छ। यो तिनीहरूलाई छ र विज्ञापन डिजाइन।
unaddressed विज्ञापन को लाभ
मेलबक्स फैलाउन पत्रक जनसंख्याको फरक खण्डहरूमा कवर र आफ्नो खरीदारों पाउन। यो वितरण च्यानल जानकारी को अन्य लाभ के हुन्? त्यहाँ धेरै लाभ हो:
मेलबक्स मा विज्ञापन को Dissemination चाँडै पर्याप्त बन्द दिन्छिन् र राम्रो प्रदर्शन सूचक छ। औसत हरेक पाँचौं रुचि उत्पादन। र आठ मा थप एक जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ। उहाँले विज्ञापनदाता प्रतिनिधि संग फोन बिक्री वा सम्पर्क को बिन्दु मा आउनेछ।
लामो पर्याप्त आँखा सम्पर्क संभावित खरीदार खुद्रा नेटवर्क यो ट्रेडमार्क चिनो लगाइएको उत्पादनहरु खोज्न जारी गर्न ब्रान्ड सम्झना गर्न अनुमति दिन्छ। यो विज्ञापन को स्थिर र मोबाइल प्रकारका फरक गर्न लाभदायक छ। ठूलो बिलबोर्डहरू, ट्रक पक्ष-लुगा सबै हेर्नुहोस्। तर जो विज्ञापनदाता गणना गर्न सक्नुहुन्छ अधिकतम, - उत्पादनहरु को उद्यम वा ब्रान्ड को वृद्धि नाम पहिचान। यस सन्दर्भमा Leaflet धेरै लाभदायक छ। यो सम्पर्क डेटा को एक पूरा सेट प्रदान गर्दछ, र थप विवरण मा विज्ञापन उत्पादन वा सेवा वार्ता।
प्रसार मेलबक्सहरू स्थानीय, स्थानीय बजार गर्न अभिमुखीकरण गर्न अनुमति दिन्छ।
विज्ञापनदाताहरु लागि जानकारी
एक प्रचार उत्पादन लागत-प्रभावकारिता आकलन गर्न मेलबक्सहरू यसको वितरण लागत विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो सेवा को लागत पत्रक वा समाचार पत्र को संख्या मा निर्भर गर्दछ, तपाईं दिन आवश्यक छ। त्यसैले, एक 10 हजार वाहन, दोस्रो गर्न मूल्य अप मा पत्रक वितरण लागि गठन गरिएको छ -। 20 हजार संभावित ग्राहकहरु अधिकतम पुग्न गर्न, र तेस्रो -। 20 भन्दा बढी 000 टुक्रा को उत्पादन मात्रा लागि। सम्भव रूपान्तरण मान वजन मात्रा मुद्रण उत्पादनहरु वा इलाका कागज विज्ञापन वितरण हुनुपर्छ जसमा आधारमा।
विज्ञापन को वितरक लागि समस्या
मेलबक्स मा पत्रक को पहिलो वितरण - जिम्मेवार प्रक्रिया विज्ञापन कम्पनी को सफलता सीधा असर छ। उहाँले इमानदारिता र निष्ठा ब्यूरो कार्यकर्ता बिना हुन सक्दैन। मेलबक्स मा विज्ञापन को Dissemination निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। यो गर्न, धेरै एजेन्सीहरू प्रदर्शन सेवाहरू विशेष गुण निरीक्षण सेवाहरू स्थापित गरेको छ। peddlers काम सिधै पालन गर्न मौका पनि छ। यो अन्त गर्न, नियन्त्रण विभाग कर्मचारी साथ आपूर्तिकर्ता को प्रतिनिधि बेनामी जहाँ उत्पादन विज्ञापन लगे छ क्षेत्रमा जानुहोस्। प्रत्येक मेलबक्स एक leaflet छ भने, त्यसैले एजेन्ट महिमा मा काम गरेको छ।
एक सेवा जस्तै कसले लाभ उठाउन सक्छौं?
हामी सबैलाई व्यवसायी लागि उपयुक्त छ कि एक विज्ञापन सेवाको रूपमा मेलबक्सहरू मा समाचार पत्र को वितरण गर्ने, छैन भन्न सकिन्छ। यो यस्तो ढुवानी फाइदा छ र यो विधि को सीमितता विचार गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, जुत्ता मर्मत सानो केन्द्र नजिकैको क्षेत्रमा यसको विज्ञापन सामाग्री विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। को फराकिलो बजार कवरेज दोकान मालिक रुचि छैन। यो सम्भव छैन खरीदारों एक ठूलो खण्ड सेवा छ। त्यसैले, यस्तो स्थानीय विज्ञापन उहाँलाई लागि पूर्ण फिट।
अर्कोतर्फ, मेलबक्सहरू छापिएको सामाग्री को नियुक्ति विशिष्ट लक्षित दर्शक गर्न उन्मुख गर्न सकिन्छ। नियम, आजकल लगभग मध्य-वृद्ध व्यक्ति वा पेंशनरहरुलाई प्राप्त। त्यसैले ठेगाना नाइटक्लब र फैशन बिक्री सफलता छैन साथ फ्लायरहरू। तर तिनीहरूले घरेलू उपकरण, ढोका स्थापना, प्लास्टिक Windows, उपग्रह व्यञ्जन लागि नजिकका पसलहरु मा उत्पादन, कारीगरों मरम्मत सेवामा छूट र प्रगतिको बारेमा जानकारी अधिक रोचक हुनेछ। रिपोर्ट डाटा को लक्ष्य दर्शक को सही विकल्प र बाटो चाँडै, उत्पादन र मुद्रित सामाग्री वितरण को लागत लागि दिन्छिन् विज्ञापन को प्रभावकारिता बढ्छ।
को मेलबक्स वितरण
मास्को, पाठ्यक्रम, उद्योग को संसारको केन्द्र हो। र यो शहरमा, त्यहाँ लगभग सबै ब्रान्डहरु को कार्यालय छन्। यो सेवा ठूलो उत्पादकहरु, निर्माताहरू र वितरक विश्व-प्रसिद्ध व्यापार कम्पनीहरु चासो छैन कि जस्तो लाग्न सक्छ। निस्सन्देह, यो चिरपरिचित बियर ब्रान्ड वा तरिकामा लोकप्रिय घर उपकरण कुनै एक कुनै विज्ञापन हुनेछ। तर राम्रो ब्रान्ड विज्ञापनदाताहरु आफ्नो फाइदा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्त गर्न, एक leaflet वा पुस्तिका तल मुद्रित को बिक्री मा चिरपरिचित लोगो र पाठ लागू गर्न। तर यो विज्ञापन को यस प्रकार को लागि भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ ब्रान्ड को मालिक को सहमति आवश्यक छ। असम्भाव्य हुनत जिल्ला सम्पत्ति अधिकार को एक उल्लंघन यस्तो को मात्रा मा धेरै हुन।
वितरण र संलग्न!
तपाईं यदि यो सही बनेको छ र एक निश्चित स्तर को मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ, कागज उत्पादनहरु को प्रचार को पनि एउटा सानो टुक्रा, देख्न सक्नुहुन्छ, यो उद्यमीहरू र संभावित खरीदारों धेरै फाइदा ल्याउन सक्छ। आफ्नो उत्पादन विशिष्ट लक्षित दर्शक को लागि अभिप्रेरित छैन, यदि र तपाईं संभावित ग्राहकहरु आकर्षित गर्न एक बाटो मा गाह्रो निर्णय गर्न पाउन, तपाईंले विज्ञापन एजेन्सी को एक प्रतिनिधि संग पत्रक, समाचार पत्र वा पुस्तिका फैलाउन तरिका मा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
मध्यस्थ बिना "Yandeks.Taksi" कसरी जडान गर्न?
"कुनै" नीरस सेतो ओढ्ने भन्छन्।
निकासी उपकरण - यातायात वाहन लागि विश्वसनीय सहायक
"म्याकडोनाल्ड गरेको" को रहस्य। मार्केटिङ म्याकडोनाल्ड गरेको
घर बर्ड Feeders
एक सरल अंकन गेज आफ्नै हात सिर्जना
बख्शते खुराक: परिभाषा, सुविधाहरू, विशेषताहरु र सिफारिसहरू